WARBIXIN: Real Madrid oo kooxaha Barcelona iyo Man United kula soo biirtay raacdada loogu jiro Matthijs De Ligt. – Gool FM
WARBIXIN: Real Madrid oo kooxaha Barcelona iyo Man United kula soo biirtay raacdada loogu jiro Matthijs De Ligt.
(Yurub) 21 June 2019. Real Madrid ayaa lagu soo warramayaa inay diyaar u tahay dagaalka loogu jiro difaaca Ajax ee Matthijs de Ligt saxiixiisa.
Difaacan ayaa lala xiriiriyay dhowr koox oo ka mid ah kuwa ugu awoodda badan qaaradda Europe oo ay ku jiraan Barcelona, Manchester United iyo Paris Saint-Germain.
Sida ay ku warrameyso RMC Sport, Los Blancos ayaa qayb ka ah kooxaha xiiseynaya Matthijs De Ligt, waxaana durba ay billaabeen inay mustaqbalkiisa ka hadlaan.
Real ayaa si xoog leh ugu mashquulsan suuqa kala iibsiga xagaagan, iyagoo horraanba dhammeystiray saxiixyadada Eden Hazard, Luka Jovic iyo Ferland Mendy, halka suuqa xagaaga ka hor ay ku dhawaaqeen saxiiyada Eder Militao iyo Rodrygo.
Los Blancos ayaa hadda heysata difaacyo dhexe oo ku filan, waxaana diiwaankooda difaacyada ku qoran Captain Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho iyo Jesus Vallejo, si la mid ah Militao oo kooxda ku cusub.
Si kastaba ha ahaatee Zinedine Zidane ayaa lagu soo warramayaa inuu weli doonayo difaacan, maadaama 19-jirkan bandhig waalli ah uu sameeyay, xilli uu weli curdun yahay.
De Ligt ayaa tallaabo wanaagsan qaaday isagoo goor hore kasoo qalin jebiyay kulyadda da’yarta kooxda Ajax, waxaana kooxda waaweyn uu u saftay 117 kullan.
Xilli ciyaareedka idlaaday De Ligt waxa uu hormuud u ahaa in kooxdiisa ay hanato Horyaalka Eredivisie iyo koobka maxalliga ah ee dalka Holland laga ciyaaro, sidoo kalana waxaa xiddigaan waxaa lagu qiimeynayaa bandhiggiisii koobka horyaalada yurub maadaama uu kooxdiisa la gaaray semi final-ka tartanka.
Xiddig ka ciyaara horyaalka Premier League oo iska diiday inuu ku biiro kooxda Manchester United
Kooxda A Milan oo dhigeeda Real Madrid kala hadashay saxiixyada laba xiddig oo khadka dhexe ka ciyaara!